China Electric Kettle Temperature Kudzora Girazi Tii Ketiri Kugadzira uye Fekitori | Kennede
Precision control - imwe neimwe yemabasa inotsigirwa neyakagadziridzwa dhizaini inobvumira chaiyo uye yakakwana nguva uye tembiricha zvidzoresa kuti zvisangoburitsa zvakanakisa mubhureki rega rega, asi kugadzira zvinwiwa zvako nenzira yavanoda kuti inakirwe nayo pasina kunetseka. .Voltage:110/220 V
Girazi Muviri uye Hutano: Chikafu-giredhi zvinhu zveborosilicate girazi remagetsi kettle inopa yakachena kuvira nharaunda, 304 simbi isina tsvina yemukati uye tii infuser hapana zvinokuvadza kana kunhuhwirira kusingafadzi kunotungamira iwe hupenyu hune hutano, hwakachengeteka uye hwakasununguka.
[Mushandisi-ushamwari Dhizaini]: Easy-pour spout inouya ne mesh sefa ye Stainless simbi chivharo, kudzivirira sikero madhipoziti kupinda muchinwiwa chako. Kavha inovhura nyore chivharo chekuzadza nekukurumidza. Kutonhorera-kukubata-kubata kunopa kumwe kuchengeteka. 360 degree cordless base yekuwedzera zviri nyore.
Zviri Nyore Kushandisa: Iyi yemagetsi tii inogadzira iri nyore kushandisa, tenderedza iyo MENU knob munzira yewachi kana yakatarisana newachi kuti usarudze basa raunoda pasina kumisa nguva kana tembiricha, uye ipapo unongoda kumirira kuti nguva yekubika ipere uye unakirwe nechikafu.
Zviri Nyore Kuchenesa: Muromo wakafara weketero unoita kuti zvive nyore kuchenesa nekuzadza ketero nekapu imwe yevhiniga kana muto weremoni uye 2 makapu emvura kuitira kuchenesa kuita zvirinani.
1.5L yakawanda-inoshanda hutano poto
Kuwedzera simba: 1.5L
Rated Simba: 800W
360 dhigirii inotenderera base
LCD kuratidza pane digital panel
Chengetedza basa rinodziya
22 hutano basa
Borosilicate girazi poto muviri
Saizi yekatoni: 57 * 41.5 * 47.2cm
1.8L yakawanda-inoshanda hutano poto
Hukuru hwekugona: 1.8L
Kurongedza: 1 pc / bhokisi, 8 pcs / katoni
Saizi yekatoni: 59 * 56 * 61.5cm
12 hutano basa
Zvinotevera: Mini fan ine Battery kubva kuKennede